Fihetsiketsehana Nataon’ny Tanora Tany Syria Hanohanana Ny Syrian Air · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2018 3:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, Español, عربي, English
Nanomboka tamin'ny Volavolan-dalàna momba ny Tamberin'andraikitra ao Syria (Syria Accountability Act: SAA) tamin'ny taona 2004, dia nametraka andianà sazy ara-barotra sy ara-toekarena ho an'i Syria i Etazonia. Nisy fiantraikany teo amin'ny fiainana andavanandron'ny olom-pirenena Syriana tamin'ny sehatra maro ilay sazy, anisan'izany: ny famerana mivezivezy any ivelany, ny fandraràna ny rindrambaiko sy ny fanondranana fitaovan'ny teknolojia, ary ny famerana ny serasera ara-barotra ihany koa.
Ankoatra izay, namely mafy ny zotra an'habakabaka Syrian Air ireo sazy ireo. Tamin'ny fandraràna ny fividianana fiaramanidina ara-barotra vaovao sy ny fividianana kojakoja hanoloana ny simba ho an'ny fiaramanidina, nahena ho telo monja sisa araka izany ny isan'ireo fiaramanidina miasa .
Nanomboka nanao fanentanana ny vondrona tanora Syriana ho fanohanana ny Syrian Air rehefa nahita ny fahavoazana nahazo azy. Nanangana tranonkala sy vondrona Facebook izy ireo, ary nahangona mpanohana an'arivony tao anatin'ny iray volana. Hoy ny fanambaran'ny tranonkalan'ny fanentanana hoe:
Nanoratra momba ilay fanentanana tao amin'ny bilaoginy خربشات ( Kharbashat : soratsoratra) ihany koa ilay bilaogera Syriana Fadi Halisso :